Herisetra ara-nofo : 63%-n’ny zatovo sy ny ankizy mitady « fiarahana » amin’ny tranonkala – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:46
Facebook anisan’ny isehoana karazana serasera maro
Accueil/Fanadihadiana Manokana/Herisetra ara-nofo : 63%-n’ny zatovo sy ny ankizy mitady « fiarahana » amin’ny tranonkala
Herisetra ara-nofo : 63%-n’ny zatovo sy ny ankizy mitady « fiarahana » amin’ny tranonkala
Mirongatra ny fanararaotana sy ny herisetra ara-nofo atao amin’ny zatovo sy ny ankizy na ny zaza, amin’ny alalan’ny « internet », indrindra amin’ny alalan’ny tambajotra sosialy toa ny Facebook. Maro ny mitady olona iarahana ao, kanefa mivily amin’ny lalan-kafa ny raharaha avy eo.
Mandritra izao fahamehana ara-pahasalamana izao, anaty fihibohana, mandany adiny dimy farafahakeliny ny olona, indindra ny tanora sy ny ankizy tsy ampy taona miditra « internet », ka ny tambajotra sosialy toy ny Facebook no andaniny ny androny. Miteraka zava-dratsy ho azy ireo izany, izay anisan’ny mampirongatra ny herisetra ara-nofo amin’ny tranonkala. Misy ifandraisany amin’izany ny fivarotan-tena mifandraika amin’ny fampiasana teknolojia vaovao Ny taona 2015 no nanao fanadihadiana ny ECPAT France, ary mbola mitombina sy mitombo amin’izao fotoana izao, fa ny 63%-n’ny zatovo ao anatin’ny adolantsento sy ny ankizy no mampiasa tranonkala hitadiavana olona iarahana. Ny 75,3% an’ireo dia nifanao fotoana mivantana tamin’ny olona nifampiresahana tanaty « internet » na tambajotra sosialy. 87,7% amin’ireo ihany no efa nandefa sary tamin’ny olona niresahany, ka ny 29,2% nandefa sary niboridana na amin’ny ampahany. Niakatra be ireo isa ireo tao anatin’ny taona vitsy noho ny fiboroboan’ny fandrosoan’ny fahalalahana miditra anaty tranonkala.
Napetraka ny vovonana fitorohana ny herisetra ara-nofo
Manoloana ity firongatry ny fanararaotana sy ny herisetra ara-nofo ho an’ny ankizy ity, nisy ny fiaraha-misalahy amin’ny Ministeran’ny Mponina sy ny Internet Watch Foundation, ny Unicef, ny fiaraha-monina Youth First ary ny ECPAT France, ka misokatra manomboka omaly ny vovonana na tranonkala fitorohana vaovao : IWF Report, hahafahana mametraka fitarainana na fitorohana raha sedra tojo sary na horontsary mamoafady hahitana zaza na ankizy Malagasy. Amin’ny alalan’io tranonkala io no andefasana izay endrika rehetra maneho fanararaotana na herisetra atao amion’ny ankizy na zaza. Azo alefa ao avokoa na eto Madagasikara na any ivelany.
Izay sary na horonan-tsary maneho herisetra na fanararaotana ara-nofo na mamoafady amin’ny ankizy na zaza dia raisin’ny IWF avy hatrany ary fafany anaty Internet. Misy ihany ny fampiasana teknolojia avo lenta amin’ny fahitana sy ny fanarahana izany. Ireo olona mandefa izany kosa dia enjehin’ny lalàna avy hatrany, ary ny IWF no mandefa ny mombamomba azy ireo any amin’ny manampahefana eto amintsika ahafahana manenjika azy ireo araka ny lalàna.
Lasibatra ny ankizy amin’ny alalan’ny «internet ».
Ady manerana izao tontolo izao
Ady maneran-tany mihitsy ity fanararaotana sy herisetra manjo ny ankizy ity, ary anisan’ny mandray anjara amin’izany i Madagasikara. Ankoatra ity tranonkala vaovao vao napetraka ity, mitohy hatrany koa ny fampiasana ny laharana maitso 147 sy ny tranonkala azozaza.mg. Manampy ireo ny fampiasana ny teknolojia vaovao hanamafisana ny efa misy.
Madagasikara no mpikambana faha 41 maneran-tany, ary faha 18 eto afrika mampiasa ity vovonana Internet Watch Foundation.
«Manoloana ny firongatry ny fanararaotana sy ny herisetra ara-nofo amin’ny alalan’ny fampiasan’ny ankizy « internet » eto amintsika, mandray andraikitra amin’ny ady sy fanafoanana ary ny fiaraha-miasa amin’izany ny minisitera. Ny fiaraha-miasa amin’ny Internet Watch Foundation, izay nametrahana ny vovonana fitorohana eto Madagasikara dia dingana lehibe amin’ny fanatanterahana ny tanjona »,
hoy ny minisitra ny mponina, ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy Naharimamy Lucien Irmah.
« Tsy andeferana ny fanararaotana sy ny herisetra ara-nofo atao amin’ny ankizy, na amin’ny alalan’ny « internet » io na mivantana ihany koa. Antom-pisian’ny Unicef izany, ka hanohany ny fametrahana ilay vovonana mitoroka ny mahazo ny ankizy. Ny tena lehibe indrindra amin’izany ny ahafahana manala tanteraka amin’ny internet ireny sary mamoafady manjo ny ankizy ireny, ka iarovana azy ireo indrindra amin’ny mety hanimba ireo ankizy aoriana »,
hoy ny solotenan’ny Unicef amin’ny fiarovana ny ankizy Nicolette Moodie. Nilaza fa faly amin’ny fiaraha-miasa amin’ny governemanta malagasy amin’ny alalan’ny ministeran’ny mponina sy ny Unicef, amin’ny ady atao ity, ny tale mpandrindra ny Internet Watch Foundation, Susie Hargreaves.
Mila fanaraha-maso manokana : Loza mitatao ho an’ny ankizy ny fampiasana « internet »
Araka ny fanadihadiana nataon’ny Unicef, hatramin’ny niandohan’ny fihibohana, nihamaro ny ankizy tafiditra amin’ny fampiasana « internet ». Vokatr’izany, mitombo koa ny loza mitatao amin’ireny ankizy ireny toy ny fanararaotan’olon-kafa azy, ny fijerevana sary na horonantsary tsy mifanaraka amin’ny taonany. Anisan’izany ny fampiasan’ny ankizy ny Facebook, izay maro ny zavatra ratsy mety aterany. Mora ho an’ny ankizy rahateo ny manokatra kaonty amin’izy ireny, ka ny olon-dehibe aza mety tsy maharaka izany. Tompon’andraikitra voalohany amin’ny fiarovana sy ny fanaraha-maso ny ankizy mampiasa Facebook ny ray aman-dreny. Mila fanaraha-maso manokana mihitsy ny ankizy, na ny zatovo aza amin’izao vanim-potoana izao.
Mivaro-tena anaty Facebook ny zatovo
Ireo zatovo izay misy ny voasariky ny fovarotan-tena anaty Facebook, ary maro izy ireo tazana anatin’izany. Misy ny sahy miseho mivantana mihitsy amin’izany amin’ny alalan’ny fandefasana « publication » sy sary. Ao ihany koa ny any anaty hafatra miafina any, ka amin’ny alalan’ny teny miampita amin’ny samy mpinamana no isehoan’izany. Matetika ireo lehilahy lehibe manodidina ny 45 ka hatramin’ny 55 taona eo manjifa azy ireo, ankoatra ireo lehilahy manodidina ny 30 ka hatramin’ny 45 taona izay misintona azy ireo anaty fisotroana. Iretsy sokajin-taona voalohany izay miandry na miaraka anaty hotely. Ireo sokajy faharoa kosa mitondra amin’ny toerana iray ka mahatonga ny ankizy hiala ao an-tranon-dray aman-dreniny na ny « fugue ». Tsy voahara-maso ny hotely fitondran’ireo lehilahy ireo ankizy amin’ny ankapobeny, ankoatra ny fisian’ny trano manokana itondrany azy ireo.
Tsy ampy fialamboly, tsy fisiana vola
Amin’ny ankapobeny noho ny tsy fahampian’ny fialamboly ho an’ny ankizy sy ny zatovo mahatonga ny fiitaran’ny sain’izy ireo ho any amin’ny ratsy. Eo ihany koa manampy trotraka ny fahasahiranana ara-bola eo amin’ny ray aman-dreniny, ka mitady fomba ahazoana izany haingana sy vetivety ireo ankizy. Ny mpijirika azy ireny ihany koa efa miandry fotsiny.
Araka ny voalaza etsy amin’ny lahatsoratra pejy faharoa, misy ny tranonkala antsoina hoe Arozaza, izay ahafahana mametraka fitarainana raha misy ny tranga maneho herisetra amin’ny endriny rehetra ho an’ny ankizy. Mpisehatra maro no miara miasa ao, ahitana ny Unicef, ny Centres Vonjy, ny polisy miaro ny aza, ny polisy misahana ny cybercriminalité, ny fitsarana sns. Azon’ny rehetra atao ny miditra amin’io ka mametraka fitarainana, na maneho tranga miseho any rehetra any kanefa tsy misy manday andraikitra. Misy koa ny laharana maintso 147 azo antsoina amin’ny alalan’ny tambajotram-pifandraisana rehetra.
Ny laharana maitso 147 na ny Arozaza raha tojo herisetra mianjady amin’ny zaza/ankizy ianao Maimaipoana ary ao anatin’ny fanajana tanteraka ny tsiambaratelo no andraisana ny fitarainana sy fitoriana amin’ireo tambazotra 3 ireo.
FANAOVANA MALOTO AN-DALAMBE : Olona 549 no tra-tehaka tao anatin’ny telo volana